DOWLADA SOOMAALIYA OO SHEEGTAY IN MARAAKIIB MASAR LAGA LEEYAHAY XAALUF BA’AN KU HAYAA XEEBAHA DALKA | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta DOWLADA SOOMAALIYA OO SHEEGTAY IN MARAAKIIB MASAR LAGA LEEYAHAY XAALUF BA’AN KU...
DOWLADA SOOMAALIYA OO SHEEGTAY IN MARAAKIIB MASAR LAGA LEEYAHAY XAALUF BA’AN KU HAYAA XEEBAHA DALKA
Dowladda Somaaliya ayaa sheegtay in maraakiib kuwa badda xaalufiya ah oo laga leeyahay dalka Masar ay si sharci darro ah uga kalluumaysanayaan xeebaha Soomaaliya.
War saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Kalluumaysiga iyo Khayraadka Badda ayaa lagu sheegay in muddadii u dhaxaysay bilihii October ilaa December 2020-ka ay 37 markab oo wata calanka Masar lagu arkay iyagoo si sharci darro ah uga kalluumaysanaya xeebaha Soomaaliya.
Muuqaallo ay soo duubeen ciidamada badda ee Midowga Yurub ayaa muujinaya maraakiibta Masar oo ka kalluumaysanaya xeebaha Soomaaliya iyaga oo sita shabaagaha badda xaalaufiya, ka dibna kalluunka u diyaarainaya sidii loo iibin lahaa, ayey sheegtay dowladda Soomaaliya.
Marka la raaco sharciga waddanka, biyaha xeebta Soomaaliya ee dhererkiisu yahay 24 nautical miles (nm) oo ah halbeegga lagu cabbiro dhererka badda ayaa loo qayday maraakiibta Soomaalida ee kalluumaysiga, halka 12 nautical miles loo reebay kalluumaysatada yaryar ee degaannada ku teedsan xeebaha, sida lagu sheegay war saxaafadeedka.
Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in labada xayndaab ee biyaha badda ee loo qayday kalluumaysata Soomaalida lagu arkay maraakiibta Masar oo ka kalluumaysanaya. Waxa ay dowladda Soomaaliya sheegtay in maraakiibta badda xaalufiya ay manuuc ka yihiin biyaha Soomaaliya sababtoo ah waxay dhaawacayaan bay’ada kalluunka uu ku tarmo.
Ogaanshaha maraakiibka Masar ee ka kalluumaysanaya xeebaha Soomaaliya ayaa imanaysa bilo uun kadib markii sidan oo kale dowladda Soomaaliya ay sheegtay in aalad meel fog lagala socdo maraakiibta kalluumaysanaysa ay tusisay in ugu yaraan 112 doomo kalluumaysi oo Iran laga leeyahay ay sharci-darroo uga kalluumaysanayaan biyaha Soomaaliya gaar ahaan aagga dhaqaalaha.
Soomaaliya waxay sheegtay in maraakiibta lagu arkay inay sharci darro uga kalluumaysanayaan midkoodna uusan liisan ama oggolaansho ka haysan dowlada federaalka Soomaaliya.
Hannaanka liisan bixinta oo la hirgeliyey sannadii 2018-kii ayaa sheegaya in Wasaarada Kalluumaysiga Soomaaliya ay mas’uul ka tahay gacan ku haynta dhammaan wixii dhaqdhaqaaq kalluumaysi ah ee biyaha Soomaaliya.
Waxay sheegtay dawladda Soomaaliya in liisanka la siiyo maraakiibta wadata calanka shisheeye loo maamulo qaab daah furnaan leh iyadoo dhaqaalahana lala wadaagayo dhammaan lixda maamul goboleed iyo gobolka Banaadir.
Wixii shati ah ee ka baxsan nidaamkaas sharci ma aha, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya.
Dawladda Soomaaliya waxay ugu baaqday maraakiibta wadata calanka Masar in ay oggoaansho u helaan ka kalluumaysiga biyaha Soomaaliya. Waxay sheegtay inaysan dhaqangal noqon doonin heshiisyada aan sharciga ahayn ama aan rasmi ahayn oo hay’ado ama shabakado sharci-darro ah ay la galaan maraakiibtaas.
Wasiirka Kalluumaysiga iyo Khayraadka Badda Somaaliya Cabdullaahi Bidhaan Warsame ayaa ku baaqay in mas’uuliyinta Masar ay qaadaan tallaabooyin degdeg ah. Waxa uu sheegay in maraakiibtaas aan laga doonayn Soomaaliya, kalluumaysiga sharci-darrada ahna uu dhaawacayo dalka Soomaaliya iyadoo kalluunkii waddankana la xadayo.
Soomaaliya waxay ugu baaqday Masar inay gacan siiso baadhitaanka dowladda Soomaaliya iyadoo bixinaysa liiska maraakiibta lagu ogyahay inay ka kalluumaysanayaan xeebaha Soomaaliya, bixinaya nuqul ka mid ah dhammaan shatiyada ay wataan maraakiibta sita calanka Masar iyo shaqaalahooda, xaqiijiyaan in maraakiibtaas sita calanka Masar loo oggolaaday inay kan kalluumaystaan meel ka baxsan biyaha Masar, sidoo kalena keenaan nuqulka heshiisyada la xiriira shatiyada la bixiyey.
Waxay sidoo kale Wasaaradda Kalluumaysiga Soomaaliya ka dalbatay Masar inay gacanta ku dhigaan maraakiibtooda kalluumaysi ayna xaqiijiyaan in markab kasta oo sharci darro ah uu degdeg uga baxo biyaha Soomaaliya.
Maqaal horeMaxay Ka Wada-Hadleen Wasiir Bayle & Wasiir Jamaal?
Maqaal XigaMursal oo 15 Xildhibaan ka joojiyay kulamada Golaha Shacabka (Magacyada)